अन्तर्वार्ता Archives - Page2of6- Paschimnepal.com
Aug222018 by Paschim NepalNo Comments
प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ ६, २०७५ |
विश्वाशीलो र भरपर्दो सेवा प्रवाह गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सुर्खेतले आगामी असोजदेखी टोकन प्रणालीबाट सेवा सञ्चालन गर्ने योजनामा छ । जनताले बढी विश्वास गरेको बैंकमा कहिले काहीँ बढी भीडहुँदा प्रभावकारी सेवा नपाएको गुनासो पनि गुञ्जयमान हुन्छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सेवालाई छिटो छरितो बनाउन कस्तो खालको योजना बनाएको छ त ? यसै
Aug172018 by sureshNo Comments
२०२८ साल चैत्र १६ गते दैलेख सदरमुकाममा जन्मिएकी ठाटीकाँध गाउँपालिको उपाध्यक्ष सुस्मिता सिहं २०४७ सालमा नेपाल मजुदुर किसान पार्टीको सदस्यता लिएर राजनितिमा होमिएकी थिईन् । उनी खुल्ला राजनितिमा २०५५ सालबाट माले हुँदै एमालेमा आवद्ध भईन् । एमालेको जिल्ला कमिटिमा २०६४ सालबाट अहिलेसम्म जिल्ला सदस्य भई काम गरिन् । अखिल नेपाल महिला संघको उपाध्यक्ष भई लामो समयदेखी काम गरेकी सिहं स्थानीय तहमा निर्वाचनमा ठा
Jun302018 by sureshNo Comments
प्रदेशकै नमुना मानवनिर्मित ताल बनाउँने छौं
अहिले स्थानीय तहमा २० वर्षपछि जनताले जनप्रतिनिधि पाएका छन् । कर्मचारी तन्त्रबाट चलिरहेको स्थानीय तह अहिले जनप्रतिनिधिले कसरी काम गरिरहेका छन् । निर्वाचित भईसकेपछि नगरपालिकाले गरेको कामहरू, विकास योजनाहरूका बारेमा नारायण नगरपालिका दैलेखका नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्कासंग पश्चिमनेपाल डटकमले लिएको अन्तर्वार्ताको अंश । अहिले जनताले जनप्रतिनिधि पाएपछि कस्तो आभास गरेका छन् ? काम गर्दै जना जनताको प्रतिक
Mar302018 by Paschim NepalNo Comments
१.प्रदेश अाईडल गर्नुकाे उदेश्य के हाे ? समाजमा लुकेर रहेका प्रतिभालाई उजागर गर्नु नै हाम्राे मुख्य उदेश्य हाे । पिछाडी पारिएकाे प्रदेशमा जहाँ अझै पनि नागरिकहरू क्यामराकाे अघि अाएर बोल्न लाज मान्नु पर्ने अवस्था छ । यहीँ कारणले आफुसग भएकाे प्रतिभा लुकाएर बस्ने गरेका छन् । त्यहि प्रतिभावान व्यक्तिलाई मीडियाको आवश्यक थियो जुन अहिले ६ पर्देश आईडल नाम दिएर सिंगारो म्यूज़िक प्रा.लि
Feb232018 by Paschim NepalNo Comments
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, फाल्गुन ११, २०७४ |
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेश ६ मा ५२ प्रतिशत गरिबी छ । यो प्रदेशमा हालैमात्र महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका छन् । माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनयुद्ध’मा राजनीतिक कमिसार हुँदै माओवादी लडाकुको डिभिजन कमान्डरसम्मको भूमिका निर्वाह गरेका उनले अहिले प्रदेश ६ को नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । पूर्वऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका उनी अबका केही वर्षभित्र प्रदेश ६ को गरिब
Feb212018 by Paschim NepalNo Comments
प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन ९, २०७४ |
मुगु जिल्लाले वामपन्थी आन्दोलनलाई सधैं विश्वास गर्दै आएको छ । दुर्गम भए पनि विकासका सम्भावना बोकेको यो जिल्ला अहिले राजनीतिक कारणले चर्चामा छ । आफूलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै प्रदेश सभामा एमालेको तर्फबाट मुगुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद चन्द्रबहादुर शाहीको राजीनामाका कारण जिल्लाको राजनीति एकाएक तात्यो । के शाहीले राजीनामा गरेकै हुन् ? यदि हो भने उनको राजीनामा के होला ? यसै सेरोफेरोमा रहेर मुगुबाट प्
Feb142018 by Paschim NepalNo Comments
सोमवारदेखि दैलेखमा ‘दैलेख महोत्सव’ सुरु भएको छ । दैलेखको सांस्कृति पहिचानको लक्ष सहित आयोजना गरिएको यो महोत्सवमा उत्साहजन दर्शकहरुको सहभागीता रहेको छ । महोत्सवको लक्ष र उदेश्यका बारेमा महोत्सव आयोजक रिपोर्टस् क्लव दैलेखका अध्यक्ष एबं महोत्सव मुल आयोजक समिमतिका संयोजक गोविन्द केसीसंग गरिएको कुराकानी । १) महोत्सब कस्तो चल्दै छ ? अपेक्षा गरे भन्दा राम्रो चलेको छ । उद्घाटनको दिनमा प्रतिकुल मौषमका
उद्योग बाणिज्य संघ दैलेखको यहि माघ २५ र २६ गते हुन लागेको साधारण सभा तथा जिल्ला अधिवेसनमा अध्यक्षका प्रत्यासि नरेन्दबहादुर थापासंगको कुराकानी । १) चुनावमा तपाईको एजेण्डा के ? –खास कुरा के छ भने मैले ४० महिना उद्योग बाणिज्य संघ दैलेखको महासचिवको जिम्मेवारी पुरा गरे । त्यस अवधिमा धेरै काम गरेको छु । बाँकी रहेका योजनाहरु अव अध्यक्ष भएर पुरा गर्नेछु । निजि क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै सर
उद्योग बाणिज्य संघ दैलेखका अध्यक्ष प्रत्यासि कुलबहादुर विकसंगको कुराकानी । १) चुनाव तपाईको एजेण्डा के ? –चुनावमा मैले प्रतिवद्धता पत्र मार्फत धेरै कुराहरु ब्यापारिहरुमाँझ पुगेको छु । यस पहिले पनि उद्योग बाणिज्य भवन मैले सुरुमा सहयोग गरेको हुँ अहिले पनि जितेपछि अर्को तला थपेर ब्यवसायिक भवनका साथै जिल्लाकै सुविधासम्पन्न सभा हल बनाउने मेरो लक्ष्य छ । सुर्खेतदेखी हुँदै कालिकोट जुम्ला मानसरोवर पुग
Jan192018 by Paschim NepalNo Comments
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, माघ ५, २०७४ |
निर्वाचित भएयता के–के काम गर्नु भयो ? निर्वाचित भइसकेपछि हामीले चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा विभिन्न कामहरु अघि बढाएका छौँ । विकास निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौँ । साथै राम्रो काम गर्न असल सशासनको आवश्यकता पर्ने भएकाले गुरुयोजना निर्माणको विषयलाई अघि बढाएका छौँ । त्यसको अलवा हामी जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भईसकेपछि नगरभित्र बाटो नपुगेका वडाहरुमा हाल उपभोक्ता समिति गठन गरि बा